Komi रिलिज मिति संचार गर्न सक्दैन, कहाँ हेर्न + थप - Cradle View
Komi रिलीज मिति संचार गर्न सक्दैन
Komi रिलीज मिति संचार गर्न सक्दैन, कहाँ हेर्न + थप
by Dima 8th अक्टोबर 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड कोमीमा रिलिज मिति सञ्चार गर्न सकिँदैन, कहाँ हेर्ने + थप
Komi Can't Communicate "Komi-san wa, Komyushō Desu" भनेर चिनिने लोकप्रिय मङ्गाको नयाँ एनिमे रूपान्तरण हो र यो छिट्टै लोकप्रिय स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा रिलिज हुने तयारीमा छ। आज हामी रिलीज मिति मा जाँदैछौं कोमी संचार गर्न सक्दैनन्, पात्रहरू, जहाँ तपाईं यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, र थप। त्यसैले यदि तपाईं रुचि राख्नुहुन्छ कोमी र कथा जुन उनको चरित्रको वरिपरि छ, त्यसपछि हामी तपाईंलाई विवरणहरूमा भर्दा पछाडि बस्नुहोस् र आराम गर्नुहोस्।
अवलोकन - कोमी संचार गर्न सक्दैन
Komi Can't Communicate Anime सँग धेरै दर्शकहरूको लागि राम्रो आत्म-व्याख्यात्मक शीर्षक छ। यो हाई स्कूलमा पढ्ने एक केटीको बारेमा हो जसले आफ्नो कक्षाका अन्य बच्चाहरू जस्तै बोल्न सक्दैन। तर आधार यो हो कि यी मानिसहरू बोल्न/बोल्न सक्दैनन् वा गर्न सक्दैनन्, यसको मतलब तिनीहरू चाहँदैनन् भन्ने होइन। यो आधिकारिक रिलीज ट्रेलर मा उल्लिखित थियो जुन तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ:
मलाई लाग्छ कि कथाको सामान्य कथा धेरै महत्त्वपूर्ण छ र मलाई वास्तवमा यो विचार मनपर्छ। थप्न अर्को कुरा यो हुनेछ कोमी धेरै आकर्षक केटी जस्तो देखिन्छ र यसले उनको चरित्रलाई गतिशील बनाउनेछ किनभने उनी बोल्न सक्दैनन्। मैले साँच्चै एनिमीको बिन्दु पाउँछु र मलाई लाग्छ कि यो रिलीज हुँदा यो ठूलो हिट हुनेछ।
मुख्य पात्रहरू - कोमी संचार गर्न सक्दैन
त्यसैले पहिले, अवश्य पनि, हामीसँग छ कोमी शौको, आकर्षक हाई स्कूल विद्यार्थी जसको लजालु तर निर्दोष व्यक्तित्वले यो दिन्छ एनिमे यसको वातावरण। उनी सुन्दर र स्मार्ट छिन्, उल्लेख नगर्न ठूलो मुख्य पात्र।
उनीसँग लामो कालो र रेशमी चिल्लो कपाल थियो जुन उनको काँधबाट तल झर्छ। उनले हाई स्कूलको परम्परागत विद्यालय पोशाक लगाउँछन्।
उनको चिन्ता र आत्मविश्वासको कमीले मूलतया उनको साथीहरूसँग फरक, सामान्य सामाजिक रूपमा सञ्चार गर्न सक्ने तरिकामा अरूसँग बोल्न र कुरा गर्न असम्भव बनाउँछ।
दोस्रो, हामीसँग छ ताडानो हितोहितो, जो एउटै विद्यालयमा जान्छन् कोमी र उनको कक्षामा पनि छ।
उहाँका सहपाठीहरूले उहाँलाई "Tadano-Kun एक डरपोक कायर हो" - यो राख्न को लागी यो सबै भन्दा राम्रो तरिका नहुन सक्छ तर हामी देख्न सक्छौं कि उनको वर्ग को धेरै जसो उसलाई हेर्न को लागी।
उहाँ लगभग 5'7 मा हुनुहुन्छ एनिमे र रूप मा सानो छ। उनको छोटो कालो कपाल पनि छ र त्यस्तै देखिन्छ कोमी केही पक्षहरूमा।
उनले कथाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् कोमी संचार गर्न सक्दैनन्.
कहिले कोमीले प्रिमियरलाई सञ्चार गर्न सक्दैन?
कोमी संचार गर्न सक्दैनन् अक्टोबर २१ मा रिलिज हुने तय भएको छ । इजाजतपत्र समस्याहरूको कारणले केही ढिलाइ हुन सक्छ तर यो सामान्यतया नयाँ मानिन्छ एनिमे पश्चिमी दर्शकहरूको लागि पर्दामा आउनेछ October१ अक्टोबर १ 21 2021.
बाट अफिसियल ट्रेलर रिलिजसँगै एनिम हाइप र अर्को ट्रेलर द्वारा बनाईएको Netflix, यसको लागि प्रचार एनिमे त्यहाँ पहिले नै बाटो छ। तपाईं हेर्न तयार हुनुहुन्छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस् कोमी संचार गर्न सक्दैनन् हाम्रो इमेल सूचीको सदस्यता लिएर।
म कसरी हेर्न सक्छु कोमी संचार गर्न सक्दैन?
स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म जसमा देखाउने अधिकार छ कोमी संचार गर्न सक्दैनन् अहिलेको रूपमा नेटफ्लिक्स हो। तपाईं यसलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ: https://www.netflix.com/search?q=komi%20&jbv=81228573
Netflix कमिसन गरेको देखिन्छ एनिमे केहि समय पहिले, र एक subbed संस्करण उपलब्ध छ। को प्रश्न Netflix डब रिलिज गर्दा पनि धेरै टुंगो लागेको छ, तिनीहरूले गर्नेछन्। तिनीहरूले अरू धेरैको लागि यो गरेका छन् Animes र पनि एनिमे जुन डबको लायक पनि छैन। तपाइँ यसलाई कम्तिमा स्पेनी वा फ्रेन्चमा छिट्टै पछ्याउने आशा गर्न सक्नुहुन्छ, वा रिलीज हुँदा त्यहाँ हुन सक्नुहुन्छ।
हामी पनि कल्पना गर्छौं कि एनिमे भारी र सफलतापूर्वक पायरेटेड हुनेछ। त्यसोभए तपाईले यसलाई विभिन्न स्ट्रिमिङ साइटहरूमा फेला पार्न सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने सम्भावना उच्च हुनेछ (हाम्रो हेर्नुहोस्: शीर्ष १० सर्वश्रेष्ठ एनिमे स्ट्रिमिङ साइटहरू थप जानकारीको लागि लेख। )
यो पहिले देखि नै एक सुन्दर अद्वितीय र hyped-अप जस्तो देखिन्छ एनिमे। एनिमको पहिलो आधिकारिक रिलीज अघि पहिले नै धेरै समर्थनको साथ। यो निश्चित रूपमा धेरै एनिम फ्यानहरूको लागि हिट हुनेछ र म निश्चित छु कोमी संचार गर्न सक्दैनन् धेरै माझ प्रशंसक मनपर्ने हुनेछ एनिमे प्रशंसकहरू। साथै यस द कोमी संचार गर्न सक्दैनन् एनिमले देखेको छ ठूलो को लागि बिक्री को संख्या मा वृद्धि मंगा.
केही व्यापारिक सामान किन्नुहोस् र क्र्याडल दृश्यलाई समर्थन गर्नुहोस्
अघिल्लो प्रविष्टि स्कम्स इच्छामा अकानको हेरफेर भूमिकाको अन्वेषण गर्दै
अर्को प्रविष्टि भाडा-ए-गर्लफ्रेन्ड मंगा कहाँ पढ्ने